छालाको संरक्षक सनस्क्रिन
बिहिबार, २३ फागुन २०७५
छालालाई घामको नकारात्मक असरबाट जोगाउन सनस्क्रिनको प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ। कतिपयलाई गर्मी महिना मात्र सनस्क्रिन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भ्रम हुन्छ। सनस्क्रिन हरेक मौसममा प्रयोग गरी अनुहारको छालालाई घामबाट जोगाउन सकिन्छ। छालाको सुरक्षाका लागि सनस्क्रिनको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सही जानकारी नहुनेहरू पनि धेरै हुन्छन्।
सनस्क्रिन लगाउने सम्बन्धमा विभिन्न भ्रम रहेको पाइन्छ। सनस्क्रिन लगायो भने छाला बिग्रिन्छ, यसले छाला चिल्लो बनाउँछ, डन्डीफोर आउँछ, छाला कालो हुन्छ, छाला चिपचिप हुने र धुलो टाँसिन्छ भनेर यसको प्रयोग नगर्नेहरू पनि धेरै छन्। छालालाई स्वस्थ र सुन्दर राख्ने हो भने यसको नियमित हेरचाह र स्याहारसुसार गर्नुपर्छ। जसरी दाँतको सुरक्षाका लागि नियमित ब्रस गरिन्छ त्यसै गरी छालाको सुरक्षाका लागि सनस्क्रिन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
छाला रोग विशेषज्ञसँग परामर्श गरेर सनस्क्रिन छनोट गर्नुपर्छ। कस्तो टाइपको छालामा कस्तो खालको सनस्क्रिन लगाउने भन्ने आइडिया छाला रोग विशेषज्ञले राम्रोसँग दिन सक्छन्। यदि छाला चिल्लो छ भने जेलयुक्त सनस्क्रिन लगाउनुपर्छ।
सुक्खा छालाको लागि लोसन प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामान्य छालाका लागि भने क्रिम उपयुक्त हुन्छ। सनस्क्रिनले छालालाई घामको विकिरणबाट जोगाउँछ। छालामा आउने चाउरीपन कम गर्छ। छालामा बढ्दो उमेरसँगै र घामको विकिरणले पनि चाउरी बढ्छ। छालाको क्यान्सर तथा अन्य रोगको जोखिम घटाउन पनि सनस्क्रिनले महत्त्वपूर्ण छ।
कस्तो सनस्क्रिन प्रयोग गर्ने ?
धेरैको ध्यान सनस्क्रिनमा हुने तत्त्वभन्दा पनि ब्रान्डमा बढी हुन्छ। ब्रान्डेड सनस्क्रिन लगाएको भनेर दंग पर्नेहरू धेरै भेटिन्छन्। सनस्क्रिनको गुणस्तर त्यसको ब्रान्डभन्दा पनि त्यसमा हुने तत्त्व अथवा औषधिले निर्धारण गर्छ। सूर्यको विकिरणमा यूभीए र यूभीबी हुन्छ। यी दुवै खाले विकिरणलाई रोक्न सक्ने सनस्क्रिन प्रयोग गर्नुपर्छ।
सनब्लक क्रिम, लोसन, जेल र स्प्रेमा पनि उपलब्ध हुन्छ। यसको मुख्य काम भनेको सूर्यको अल्ट्रा भ्वाइलेट किरणलाई केही मात्रामा भए पनि सोस्नु र परावर्तन गर्नु हो। यसले छालालाई घाममा डढ्नबाट जोगाउँछ। सुक्खा छालामा क्रिम र लोसन प्रयोग गर्नुपर्छ। डन्डीफोर भएको र चिल्लो छालाका लागि जेल तथा स्प्रे प्रयोग गर्नुपर्छ। स्किनमा लाइटिङ ल्याउने क्रिममा पनि सनस्क्रिन क्रिम मिसाएको हुन्छ।
कति सनस्क्रिन लगाउनुपर्छ ?
नियमित सनस्क्रिन लगाउनेलाई पनि सनस्क्रिनको मात्रा कति चाहिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। प्रतिवर्ग सेन्टिमिटर छालामा दुई मिलीग्राम सनस्क्रिन लगाउनुपर्छ। तर, साधारणतः अधिकांशले चार गुणा कम अर्थात् शून्य दशमलव पाँच मिलीग्राम मात्र सनस्क्रिन लगाएको हुन्छ।
जसले गर्दा उसले जति नै धेरै एसपीएफ उल्लेख गरिएको सनस्क्रिन लगाएको भए पनि एपीएफको लेबल चारपाँचमा झर्छ। कपितय प्रचार–प्रसारमा सनस्क्रिन लगाएपछि घाममा खुलमखुल्ला हिँडे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हुन्छ। यो गलत हो। सनस्क्रिन लगाए पनि छालामा घाम सीधा पर्न दिनु हुँदैन। त्यसले असर गर्छ। छाता, पूरा बाहुला भएको कपडा लगाउनेलगायत लगाउन सकिन्छ। सकेसम्म बिहान १० देखि २ बजेसम्मको घाममा निस्कनु हुँदैन।